Pages: « 1234567 » | Go Down
Author Topic: နှစ်သက်မိသော သရော်စာများ (Read 38957 times)
Re: နှစ်သက်မိသော သရော်စာများ
« Reply #50 on: February 04, 2012, 10:13:35 AM »
အချစ်(Love)တက္ကသိုလ်(University) ...အတိုကောက် LoveU.. ကျောင်းသူ
« Reply #51 on: February 08, 2012, 01:32:58 PM »
နှစ်သက်မိလို. ပြန် Share ပေးလိုက်ပါ၏ ။
က ကလေးငယ် အမြည်းဝယ်..။
စ စခန်းမှာ မူးလိုပါ..။
ဆ ဆရာကြီး အရက်သမားကြီး..။
ဇ ဇရက်ကြော် ဂွတ်တယ်နော်..။
ည ညနေခင်း သောက်ပွဲဆင်း...။
တ တောအရက် မိုက်တဲ့ကွဲ့..။
ထ ထန်းရည် သောက်မပြေ..။
ဒ ဒညင်းကြော် မိုက်တယ်နော်...။
ဓ ဓနိရည် သောက်မယ်လေ..။
န နံကင် မြည်းလိုက်ချင်..။
ပ ပုစွန်သုတ် အမြည်းလုပ်...။
ဖ ဖဲထုတ် အဖော်လုပ်..။
ဗ ဗရာကြော် မြည်းမယ်နော်..။
ဘ ဘီယာ သောက်မယ်ကွာ..။
မ မရမ်းသီး မြည်းသာမြည်း..။
ယ ယုန်ဟင်း ပွဲတော်ခင်း..။
ရ ရိုးရာ သောက်ပွဲပါ..။
လ လူငယ် သောက်မယ်ကွယ်..။
၀ ၀ီစကီ လွမ်းပါသည်..။
သ သူငယ်ချင်း အရက်သမားအသင်း..။
အ အိမ်အပြန် မူးလို့အန်....
(အရက်သမားကြီးတစ်ဦး၏ အိပ်ဖွင့်ကဗျာ) XD
« Reply #52 on: March 02, 2012, 09:36:39 PM »
သဘောကျလို့ FACEBOOK ကနေ ပြန်ရှဲလိုက်ပါဒယ်
« Reply #53 on: April 22, 2012, 11:07:18 PM »
“ချစ်ရပါသာ ပိန်တာရိုးမလေး ဂွိစိန်သို့”
ချစ်လှစွာသော ပိန်တာရိုးမလေး ဂွိစိန်water………(water=ရေလို့ဖတ်ပါ)
ကိုယ် ဂွိအတွက် စာရေးလိုက်ပါတယ်။ ခေါင်းက အိမ်မှာ ကျန်ခဲ့လို့ ကိုယ်ကပဲ ရေးရတာပါ…အဲ စစချင်းမှာပဲ ရှုပ်ကုန်ပြီ။ ကိုယ် ဂွိကို စွဲလမ်းရတဲ့ သမုဒယ ချစ်ခြင်းတွေအဖြစ် နှလုံးသားနဲ့ ရင်း ရေးထားတာပါ(အမှန်က ကီးဘုတ်နဲ့ လက်ကွက်ရိုက်ပြီ ရေးထားတာ အဟီး)။ ဒီစာကို ဂွိနှလုံးသားနဲ့ မဖတ်ပါနဲ့။ အင်..ဘယ်လိုကြီးလဲလို့ မတွေးနဲ့အုံး။ နှလုံးသားက မျက်စိမှ မရှိတာ ဘယ်လိုလို့ ဖတ်လို့ရမှာလဲ မဟုတ်ဘူးလား။ အဲ့ဒါကြောင့် ဂွိကို မျက်စိနဲ့ ဖတ်ပြီး နှလုံးသားနဲ့ ခံစားစေချင်တယ်။ ဂွိခံစားဖို့အတွက် ခွက်တစ်လုံး ပို့လိုက်မယ် အဲ ယောင်သွားလို့ အဟီး။
ဂွိရယ်(ရယ်ပါဆို မရယ်ဘူး ရိုက်လိုက်ရမလား)… ငါရဲ့ ရင်ထဲမှာ မင်းကို ဘယ်လောက်မြတ်နိုင်းသလဲ သိလား။ အင်း ငါမှ မပြောရသေးတာ ဂွိက ဘယ်လိုလို့ သိမှာလဲနော်။ ကိုယ်ရဲ့ အိမ်မက်တွေထဲမှာ ဂွိ နင်အမြဲပါတယ်။ ပါတယ်ဆိုလို့ ချီးပုံ အကြီးကြီးလို့ မထင်နဲ့ အုံး။ အင်း ငါပြောမှ ပိုထင်ကုန်ပြီ အဟီး။ အိမ်မက်ထဲမှာတော့ ဂွိနဲ့ ကိုယ်နဲ့ပေါင်းရင်တော့ သုံးယောက်ပေါ့နော်။ တော်လိုက်တဲ့ ပညာရှိကြီး တစ်နဲ့ တစ်ပေါင်းတာ သုံးရတယ်လို့ ရွဲ့ မပြောနဲ့အုံး။ ကိုယ်နဲ့ မင်းနဲ့ အိမ်မက်ထဲမှာ ပေါင်းရတော့ ကလေးလေး တစ်ယောက်မွေးတယ်လေ။ အဲ့တော့ ကိုယ်နဲ့ မင်းနဲ့ ပေါင်းတာ ကလေး တစ်ယောက်တိုးတော့ သုံးယောက်ပေါ့နော် သိပြီလား ခိခိ။ ကိုယ်တော်တယ်မှတ်လား ဂွိရ။ ဂွိဟာ သူများတွေ အတွက်တော့ ကမဋ္ဌာန်းရုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ့်အတွက်တော့ အမဲရိုးလေးလိုပါပဲနော်။ အရိုးကြိုက်တတ်တဲ့ ကိုယ့်အတွက်တော့ ဂွိက လူမြင်တာနဲ့ ကိုက်ချင်စရာ ရုပ်ပေါက်တယ်ဟိဟိ။ ပြောနေရင်းနဲ့တောင် ဂွိမျက်နှာ မြင်ယောင်ရင်း အရိုးကိုက်ချင်လာပြီ…ဂလု။ တံတွေးကို မနည်းမြိုချရတယ်။
ဂွိရေ… ကိုယ့်ရဲ့ အသည်းထဲ၊ နှလုံးသားထဲ၊ ကျောက်ကပ်ထဲ၊ ကလီစာထဲ၊ အူသိမ်၊ အူမချေးခါးမကျန် ချစ်နေခဲ့ရတော့ အမုန်းတွေ မရလိုဘူးနော်။ ဂွိသာ မုန်းရင် ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ မသာတစ်ယောက်တိုးသွားမယ် သိလား။ တော်ကြာ ဂွိတရားခံဖြစ်မှာနော်။ အဲ့တော့ ကိုယ်သေရတာ ဂွိကြောင့်လို့ မဖြစ်ရအောင် ပြန်ချစ်လှည့်ပါကွာ။ ကိုယ်လို ဥစ္စာချော ရုပ်ပေါလေးကို သနားစိတ်နဲ့ ချစ်ကြည့်စမ်းလှည့်ပါ။ မီးခြစ်နဲ့ အုန်းခြစ်နဲ့ သခွားခြစ်နဲ့တော့ မချစ်နဲ့နော်။ ငိုလိုက်မှာ သိလား။ ကိုယ်က အသည်းနုတယ်။ လေတိုက်ရင်တောင် နှလုံးရောဂါဖောက်တတ်တဲ့အထိ အသည်းက နူတာ အဲ မှားလို့ နုတာ အဟီး။ သူငယ်ချင်းတွေက ပြောကြတယ် သိလား။ ဂွိနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ချစ်သူတွေဖြစ်ရင် ရာဝင်အိုးမှာ ပီကေ ကပ်သလိုဖြစ်မှာတဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ် ရာဝင်အိုးနဲ့ နှိုင်းပြီး ဂွိကို ပီကေနဲ့ နှိုင်းတာ ဒါနှိုင်းစရာလား အဲ့ဒီအရာတွေ သိက္ခာကျတာပေါ့နော်..ဟုတ်ဘူးလား ဂွိရ။
ကိုယ့်ကိုလေ“ ဂွိနဲ့ မင်းလက်ထပ်ရင် နွားဖြစ်မှာ ကျိန်သေးတယ်”တဲ့ ဘေးလူတွေက ပြောကြတယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့…ဂွိရာ။ မိန်းမမြင်ရင် ယောက်ျားတွေက ချိုပေါက်ချင်ကျတာချည်းပဲဟာ…ဘွတ်အဲ… အဲ နာတောင် နွားဘ၀ မြန်မြန်ရောက်သွားပါလားဟ။ ဂွိကို ချစ်တဲ့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်တော့ဘူး ဘွတ်အဲမယ်။ အဲ…ဆက်ချစ်မယ်။ ဘာဖြစ်သလဲ။ ဘာဖြစ်သလဲ။
ကိုယ်နဲ့ ဂွိနဲ့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် တောမရောက် တောင်မရောက် ဖြစ်နေသေးတာမို့ သူများတွေက ပြောကြတယ် သိလား။ “မင်းကို ကောင်မလေးက ပါချင်နေတာ မင်းက မဟလို့တဲ့” အဲ့လို အပြစ်တွေ စုပြီး တင်ကြတယ်လေ။ အဲ့တော့ ဂွိရယ် မအောင့်အီးနိုင်လို့ ဂွိပါချတော့မယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ကို ကြိုပြောပေါ့နော်။ ကိုယ် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကြီးကြီး ပို့လိုက်မယ် သိလား။ အားရပါးရသာ…ပါနော် အားနားစရာ မလိုပါဘူး… ဂွိ အဟိ။
ဂွိအကြောင်းကို တွေးလိုက်တိုင်း ညညဆို ကိုယ်အိပ်လို့ မရဘူး။ ကုတင်အောက်က ဂျပိုးတွေက အရမ်း အရမ်းကိုက်တာပဲ။ အဲ ဟုတ်ပါဘူး။ သိပ်ချစ်လို့ ခံစာချက်တွေ ပြန်တွေးနေလို့နော် အဟီး။ အဲ့ဒီအတွက်ပဲ ဂွိကို တံတွေးစွတ်ပိတ်ထားတဲ့ စာအိတ်ကလေးနဲ့ ရင်ဖွင့်မိတာပါ။ ဒီချစ်သ၀ဏ်လွှာဖတ်ပြီးရင်တော့ ဂွိကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေချင်စိတ်ပေါက် အဲ ကိုယ့်ကို အဖြေပေးနိုင်အောင်လို့ပါ။ ဒါပဲနော်… ဖတ်ပြီးတာနဲ့ ဂွိ ချက်ခြင်း ချစ်တယ် အဖြေပေးရမယ်။ ချစ်တယ်လို့ ပြန်မပြောရင်တော့ ဂွိတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျိန်စာစူးမှာပဲ။ ဘာကျိန်စာလဲ ဟုတ်လား။ သိချင်တယ်ပေါ့ ဟုတ်လား။ မပြောပါဘူး။ သိချင်ရင် ဖတ်ကြည့်။ အောက်မှာ ရေးထားတယ်။
“ဒီစာဖတ်ပြီး ငါ့ကို ချစ်တယ် မပြောသူများသည်
ဖတ်သည့်နေမှ စလို့ ထမင်းစားတိုင်း ခဲကိုက်မိပါစေ
ယောက်ျားယူတိုင်း အခြောက်မနဲ့ ညားပါစေ
လမ်းလျှောက်သွားတိုင်း ခွေးချီးပုံ နင်းမိပါစေ
ဘတ်စ်စကားစီးတိုင်း ပိုက်ဆံ အတန်ကြီး ကုန်ပါစေ
ဤကား အတိုချုံး ငါ၏ ကျိန်စာပင်တည်”
တွေ့လား…ဂွိ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကို ချစ်တယ်လို့ အဖြေ ဖတ်ပြီးပြီးချင် ပေးခိုင်းတာပါ။ အတိုချုံးကျိန်စာတောင် အဲ့လောက် ဆိုးနေရင် အကျယ်ချဲ့လိုက်ပါက ဂွိရဲ့ မျက်ရည် ဘူးသီးလုံးလောက် ငိုချင်းချသွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဂွိက ကိုယ့်ကို ပြန်ချစ်တာပဲ လိုချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကို အဖေ မြန်မြန်လာပေး အဲမှားလို့……..အဖြေ မြန်မြန်လာပေး….အဖြေမြန်မြန်လာပေး…အဖြေမြန်မြန်လာပေးနော်။ မပေးရင်တော့ ဟင်းဟင်း။ သိတယ်မှတ်လား။
အင်း…ဒါကတော့ နိဂုံးမှာ ဂွိအတွက် စပ်ထားတဲ့ ကဗျာ။ သေချာဖတ်နော်..ဂွိ။
“ဂွိသို့ သတိပေးလွှာ ဤကဗျာ”
မရရင် လည်ပင်းကို ညှစ်ကာ
ငါ့….ဘာမှတ်သလဲ ဟင်း ဟင်း ။ ။
*** တစ်ချက်ပြုံးလိုက်တိုင်း ကောင်းမွန်ခြင်းများ ဒီရေအလား တိုးပါစေသော်***
« Reply #54 on: April 24, 2012, 12:10:32 PM »
မို့ ထဲမှာ ဖရိုဖရဲနဲ့ဆုံကြမယ်ဟေ့ ...
(ဆံပင်တွေ ထိုးလို့ ထောင်လောင် ဘောင်းB ကြပ်ထုတ် ဂြိုလ်သားရုပ်နဲ့ )
ရေကျော်က မေသော်လေးကလည်း ကိုကိုနဲ့ တူတူဂွမ်းချင်လို့လိုက်မယ်နော် တဲ့ ...
( ဂွမ်းမယ်ဆိုတာ တခြားဟုတ်ဘူးနော်... တူးပို့တူးပို့ လုပ်မှာကိုပြောတာနော ...)
စကော့ဈေးမှာတော့ အပေါ့လေးသွားချင်လို့ရေနဲ့ ရောလွှတ်လိုက်တာ ပူခနဲပဲပေါ့..
လမ်းမတော်မှာတော့ အရမ်းပျော်တာပဲ ကိုကိုရယ် ဆိုပဲ...
(ဟွန့် .. မိတဆိုးလေး...မှားသွားလို့မိဆိုးလေး ...မိဆိုးလေး..)
လသာမှာ အမပါလို့သိပ်မကဲနဲ့ အုံးတဲ့လေ..
ထော်လီကွေ့ မှာတော့ တော်ပြီဟေ့ဆိုပြီး သူ့ အမကိုတွန်းချထားခဲ့ပါလေရော..
( အွန့် ...သေပီဆရာ..)
အလုံ ငုဝါလမ်းမှာတော့ ဘယ်သူ့ ဟာမှန်းမသိအောင်ကို မူးနေရောပေါ့..
( သူ့ ဟာလိုလို ကိုယ့်ဟာလိုလို လိုလိုတွေဖြစ်နေပီ )
ကြည့်မြင်တိုင်မှာတော့ မိရင်ကိုင်မယ်ဟဆိုပြီး ဆွဲပါလေရော...
ဆရာစံလမ်းမှာတော့ ကဗျာဆန်တဲ့ slang တွေနဲ့ကြူပြီရင်း ကြူပေါ့...
( ဦးကြူကြီး အမှတ်တံဆိပ် နှာရှူဆေး..သုံးကြည့်နော်..)
ရှစ်မိုင်မှာတော့ အချစ်တွေရိုင်လာပြီ .. ရိုင်လာပြီ..
( ရိုင်ရုံတင်ဟုတ်ဘူး လဲပါလဲတော့မယ်..ကွဲနေပီလေ..)
( ယောက်ျား..ယောက်ျား..လစ်တက် ဘတ်တက်တယ်..ကိုင်ချင်တော့ အနားကိုလာ မစဉ်းစားနဲ့ တော့ကွာတဲ့..အိမ့်ချစ်ကတော့ စင်ပေါ်မှာ အော်နေတာလေ )
စမ်းချောင်းလည်းရောက်ရော မယ်မင်းကြီးမက ပန်းတောင်းပါလေရော..ကိုကို ပန်းရချင်တယ်တဲ့ ဗျ..
( ပိတောက်ပန်း.....ပိတောက်ပန်း ) တော်သေးတာပေါ့ ..ဒေါ်အေးသာကြော့
လှည်းတန်းမှာတော့ ပွဲကြမ်းတာ လက်ကုန်ပဲ..
နတ်မောက်(လမ်း)လည်းရောက်ရော ကိုကို မရှက်မကြောက်ကြေးနော်တဲ့ ..
( သီချင်းတွေ လိုက်ဆိုဖို့ ပြောတာပါဆို )
တိရ စ္ဆာန်ရုံရှေ့ မှာတော့ တိရ စ္ဆာန်ပုံလိုပါပဲ..
(မြောက်က ကတာနော.. တခြားတွေးနဲ့ )
ကန်တော်ကြီးမှာတော့ ဟိုဘက်ကားကစုံတွဲကို ပြန်အော်ပြီးတောင်ပြောလိုက်သေးတယ်..
( လဲမလားဟေ့ လို့ 
ကန်ဘောင်လည်းရောက်ရော အကြံမအောင်လို့တအားကြီးစိတ်ညစ်ပေါ့..
(တကယ်တော့ သင်္ကြန်တွင်းမှာ ရိပ်သာဝင်ချင်တာလေ...ဂယ်ကြောတာ..)
( မဖူးဖြစ်တာ )
ဆူးလေမှာတော့ အမူးပြေသွားလို့ဆုတွေပဲတောင်းနေမိပါတော့တယ်ဗျာ...ဝါးးလိမ္မာသွားပြီပေါ့နော..
( နောက်နှစ်သင်္ကြန်မှာတော့ ရေကျော်ကမေသော် မဟုတ်ပဲ J DONUTS က မေမျိုးမြတ်လေးနဲ့အကြောင်းပါလို့ချောင်းသာကို ဒိုးရပါလို့ ၏ ဘုရား.... ^_^
« Reply #55 on: April 24, 2012, 04:28:16 PM »
ကျွန်မနာမည် ဂွက်ထော်ပါ။ အခုခေတ်မှာ English နာမည်တွေပေးလာတာကြောင့် Jasmine ဂွက်ထော် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ English ပိုပီသသွားအောင်ဆိုပြီး အဖေရဲ့နာမည်ကို Middle name အဖြစ်ယူခဲ့တာကနေ Jasmine Winston ဂွက်ထော် ဖြစ်လာရပါတယ်။ Winston ဆိုလို့ ဟိုဘက်ကမ်းက Eliza Winston တို့နဲ့ ဘာမှမတော်ဘူးနော်။ အဖေ့နာမည်က ၀င်းစိန်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက ၀င်းစတိန်၊ ၀င်းစတိန် ဆိုပြီး စ ကြတာကနေ Winston ဆိုပြီးဖြစ်လာရတာ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မဒီနာမည်ကို သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာမည်အသစ်တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေများ Snow White တဲ့။ နှင်းဆီတဲ့။ မကြိုက်ပါဘူး။ ရှိပြီးသားနာမည်တွေပါ။ ရှားရှားပါးပါးလည်းဖြစ်ရမည်။ လှလည်းလှရမယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားလိုက်တာ “ခင်ပန်းချီစောမို့“တဲ့။ လှတယ်မဟုတ်လား? နာမည်ကြီး model Cindy Crawford နဲ့လည်းခပ်ဆင်ဆင်တူသွားပြီ။
ကျွန်မတို့က ဒလမှာနေတယ်။ အမျိုးတွေအကြောင်းပြောရရင် စိုက်တွေကပါ။ ဆပ်ပြာကို သူပုန်လို့ခေါ်တဲ့အရပ်လေ။ ဖေဖေရဲ့အဖေ၊ ကျွန်မအဖိုးကတော့ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းဆိုပဲ။ မှတ်မိတာကတော့ ဖိုးဖိုးက အိမ်မြောင်တို့၊ ပိုးဟပ်တို့က အစ ကြောက်တတ်တဲ့သူပါ။ ဟုတ်ကဲ့။ အဖွားကိုလည်းကြောက်ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ လူလစ်တုန်းဖိုးဖိုးကို ကပ်မေးရတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သလဲဆိုတာ။ ဆပ်ပြာကို သူပုန်လို့ခေါ်ခဲ့မိလို့တဲ့။ အင်္ဂလိပ်တွေ ရခိုင်ကိုဝင်လာတုန်းက အဖိုးတို့ရွာကိုရောက်လာတယ်လေ။ ဒါနဲ့ မင်းတို့ရွာမှာ သူပုန်ရှိလားလို့မေးတာကို အဖိုးကလျှာရှည်ပြီး ရှိတယ်၊ ရှိတယ်။ အိမ်မှာအများကြီးပဲဆိုပြီး အိမ်က ဆပ်ပြာတွေထုတ်ပြခဲ့တယ်လေ။ ဒါနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဗိုလ်ကြီးက သူ့ကိုနောက်ရမလားဆိုပြီး နားပန်ကျင်း အချုပ်ချထားလိုက်ရာကနေ တော်လှန်ရေးသမားတွေနဲ့ပေါင်းမိသွားတယ်။ သူတို့ဆီကအချက်အလက်တွေရယူပြီး ဂျပန်တွေကို သတင်းပေးခဲ့ရာကနေ ရွာကို ဂျပန်တပ်တွေဝင်လာတာနဲ့ပဲ ဖိုးဖိုးတို့တွေဟာ automatic သူရဲကောင်းဖြစ်သွားရပါတယ်။
မပြီးသေးပါဘူး။ ဂျပန်ခေတ်မှာလည်း ထပ်ဆင့်သူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်အိမ်နားရောက်လာပြီး ဘန်ဂျို၊ ဘန်ဂျို လို့အော်နေတာကို ဖိုးဖိုးက ဘင်ဂျိုတီးချင်တယ်ထင်ပြီး လာ၊ လာ ဆိုပြီး အိမ်ဦးခန်းမှာထားခဲ့ပါတယ်။ ဘန်ဂျိုဆိုတာ အိမ်သာလို့ပြောတာကိုမသိတဲ့ ဖိုးဖိုးက ရွာထဲကကာလသားခေါင်းဆီမှာ ဘင်ဂျိုသွားဌားနေတုန်း ဂျပန်က အိမ်ဦးခန်းမှာ အားရပါးရ သ မ ထားပါတယ်။ ဒါကို ဖိုးဖိုးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ ခြေထောက်နဲ့ဆောင့်ကန်ရာကနေ ဂျပန်ခမျာ လှေကားက ဒလိန့်ခေါက်ကွေးကျပြီး ဇက်ကျိုးသေရာကနေ ဂျပန်ကိုသတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီး ဒုတိယအကြိမ် သူရဲကောင်းထပ်ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲရွာမှာမနေတော့ပဲ ရန်ကုန်ကိုပြေးရာကနေ ဒလမှာနေဖြစ်သွားပါတယ်။
ဖိုးဖိုးဇာတ်လမ်းကမပြီးသေးပါဘူး။ ဂျပန်တွေကိုပြန်တိုက်ဖို့ဆိုပြီး စစ်သားစုဆောင်းတာကနေ ဖိုးဖိုးစစ်ထဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တော့ အလုပ်မရှိလို့ ရ ရာဝင်လုပ်တာပါ။ စိုက်တွေကသူရဲကောင်းဆိုပြီး သူ့ကို ရှေ့တန်းဝိုင်းပို့ကြပါတယ်။ သိပ်ကြောက်တဲ့ဖိုးဖိုးဟာ ကားမောင်းပါရစေဆိုပြီး စစ်ကားတွေမောင်းတဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ သူတို့တပ်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ တောင်ကြားလမ်းတစ်ခုကိုအဖြတ်မှာ ပြောက်ကြားစနစ်နာမည်ကြီးလှတဲ့ဂျပန်တွေက ၀ိုင်းပစ်ကြပါတယ်။ ဖိုးဖိုးဟာ ကြောက်လွန်းလို့ကားကိုရပ်၊ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ကားအောက်မှာ ပုန်းဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ကားအောက်ကိုဝင်လိုက်တော့မှ ကားဟာမြင့်တဲ့အတွက် ရန်သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ပိုကြောက်ပြီး ကားကိုရအောင် စက်ပြန်နှိုးပြီး မောင်းပြေးခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေအေးသွားတဲ့တစ်နေ့မှာတော့ ရဲရင့်သူတွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲလုပ်တာမှာ ဖိုးဖိုးနာမည်ပါခဲ့ပါတယ်။ ဆုယူခါနီးအချိန်မှာ သူတို့တပ်ရဲ့ တပ်ရင်းမှူးကပြောခဲ့တာကတော့ ဒီရဲဘော်ဟာ အင်မတန်သတ္တိကောင်းကြောင်း၊ တိုက်ပွဲဖြစ်နေချိန်မှာ ကားစက်ပျက်တာကို ကားအောက်ဝင်ပြင်ပြီး တိုက်ပွဲကနေ ဘေးလွတ်ရာကိုအမြန်မောင်းသွားနိုင်ကြောင်း။ စသည်ဖြင့်ပြောသွားပါတယ်။ တတိယအကြိမ်မြောက်သူရဲကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းပြောရရင် ကျွန်မနဲ့ ဟိုဘယ်ကမ်းက Eliza တို့ဟာစီးပွားပြိုင်ဘက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ သူကလည်းလေကြောင်းဆိုင်ရာတွေလုပ်နေတယ်။ ကျွန်မကလည်း လေကြောင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပဲလုပ်နေတာပါ။ ဒီလုပ်ငန်းဟာ ကျွန်မအဖေဆီက လက်ဆင့်ကမ်းအမွေရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Eliza Eliza နဲ့ခဏခဏပြောနေတာကြောင့် သိလို့လားလို့ မေးခဲ့ရင် သိတာပေါ့။ ကျွန်မတို့ရွာဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလာဖူးတယ်။ ဖိုးဖိုးကပြောတာက ကျွန်မနဲ့ ညီအစ်မ ၅၀မ်းကွဲတော်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ သိပ်တော့လည်းအထင်မကြီးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စီးပွားပြိုင်ဘက်ဖြစ်နေတာကတစ်ကြောင်း၊ ကျွန်မရဲ့ style တွေကိုခိုးခိုးပြီး သူကပဲစလုပ်သလိုလိုလုပ်နေတာ တွေကြောင့်ပါ။
အတင်းလို့တော့မထင်နဲ့။ သူနဲ့ကျွန်မနဲ့ကွာချက်တွေပြောပြပါမယ်။ ကျွန်မရဲ့စီးပွားအကွက်အကွင်းမြင်တတ်တာက သူ့ထက်သာပါတယ်။ လေကြောင်းလုပ်ငန်းကရတဲ့ အမြတ်တွေကို ကုန်းကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါမလုပ်ခင်မှာ ဖေဖေနဲ့ အတိုက်အခံငြင်းခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ၂ နှစ်စမ်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးစမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ရာကနေ သောက်သောက်လဲအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ဘာလုပ်ငန်းလဲဆိုတော့ ဆိုက်ကားထောင်ခဲ့ ပါတယ်။ စတုန်းကတော့ ဆိုက်ကား၆စီးနဲ့ပဲစခဲ့တာပါ။ အခုမှပြန်ပြောရရင် စခဲ့တုန်းကဆိုက်ကား၆စီးမှာ ၂စီးက without ပါ။ ဒီလိုလေးလဲမြင်တတ်မှ စီးပွားဖြစ်တာလေ။ မဟုတ်ဘူးလား? အခုတော့ဆိုက်ကား ၁၄ စီးနဲ့ တော်တော်ကိုအောင်မြင်နေပါပြီ။ ဆိုက်ကား ၁၄ စီးဆိုတော့ ဆိုက်ကားသမား ၁၄ ယောက်ကိုကျွန်မလို လှလှပပ မိန်းမတစ်ယောက်က ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်မလဲ။ လွယ်ပါတယ်။ ၇တန်း ၃ ခါကျတဲ့ကျွန်မမောင် ကို နေ့တိုင်းအရက်ဖိုးမှန်မှန်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တာ အဆင်ကိုပြေလို့။ အခုတော့ သူ့ကိုဒီလုပ်ငန်းလွှဲပေးလိုက်ပြီလေ။ ဒီတစ်ချက်ကွာတာ။ Eliza တို့များမောင်ကို ဆရာဝန်လုပ်ခိုင်းသတဲ့။ မတော်တဆများလူနာတွေဆီကရောဂါတွေကူးလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ပြီးတော့လဲသူ့မောင်ဘက်ကလည်း ကြည့်လေ။ ကိုယ့်အစ်မတစ်ယောက်လုံး အရှုပ်တွေလုပ်။ ohh sorry။ အလုပ်တွေရှုပ်နေတာတောင် ကူဖော်မရဘူး။
လုပ်ငန်းကဒါနဲ့တင်ရပ်မသွားပါဘူး။ ဆိုက်ကားသမား ၁၄ ယောက်မှာကိုယ်စီ မိန်းမတွေရှိကြတော့ အိမ်ဖော်လုပ်ငန်း၊ ထမင်းချက်လုပ်ငန်း စတာတွေကိုတိုးချဲ့နိုင်တဲ့အပြင် သူတို့တွေရဲ့ကလေးတွေကို အိမ်ကဖွင့်တဲ့ထမင်းဆိုင်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (ညကျတော့ beer ဆိုင်အဖြစ်ပြောင်းပါတယ်။) မှာခိုင်းလိုက်တယ်လေ။ ဒါတွေကို အိမ်မှာအားနေတဲ့အမေ့ကိုလုပ်ခိုင်းထားလိုက်တယ်။ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုခိုင်းတယ်လို့လာမပြောနဲ့။ နားလည်တယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က လိုလိုလားလားလုပ်နေတာ။ ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးချဲ့ချင်တာ။ မောင်ကငပျင်းဆိုတော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်ထားရတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် KTV တွေ၊ Massage တွေ၊ Beauty parlor တွေပါထပ်ဖွင့်ချင်တာ။ ဒါမှလည်းကျွန်မကိုလာညုနေတဲ့ဆရာဝန်လေးရဲ့ဆေးခန်းပါ မနီးမဝေးမှာလာဖွင့်နိုင်မှာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား? Beer station, KTV, Massage နဲ့ဆရာဝန်ဆေးခန်းဘာဆိုင်လို့လဲ။ ဆိုင်ချင်ရင်အများကြီးဆိုင်ပါတယ်။ beer သောက်ရင်းရန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ KTV ဆိုရင်းလည်းချောင်းကွဲနိုင်တယ်။ massage မှာအကြောလွဲနိုင်တယ်။ မလှမ်းမကမ်းက မြေကွက်ကိုပါဝယ်ပြီး hotel လုပ်လိုက်ချင်တာ။
အပြင်ပန်းကကြည့်ရင် လူတွေရာဂဏန်းလောက်ဝင်လိုက် ထွက်လိုက်နဲ့။ လူမိုက်ဂိုဏ်းချုပ်လိုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ My Wife isaGangster ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားဟာ ကျွန်မဘ၀ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို မှီငြမ်းပြီးရိုက်ထားတာပါ။ လူသိမခံချင်လို့ လျှို့ဝှက်ထားခဲ့ပါတယ်။ အချို့ကကျွန်မကို Mafia of Dala လို့သမုတ်ကြပါတယ်။ အမှန်က ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ယာကူဇာဂိုဏ်းခွဲအနေနဲ့ ဖာလူဒါဂိုဏ်း ဆိုပြီးလျှို့ဝှက်လုပ်ထားတာကြာပါပြီ။ အခြေအနေမကောင်းလို့ ထုတ်မသုံးသေးတာပါ။ ကျွန်မပြောနေကြစကားလိုပေါ့။ ခေတ်မကောင်းလို့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတာ။ ခေတ်လည်းကောင်းရော သွက်သွက်ကိုခါနေတာပဲ။
ဘယ်လောက်ပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြီးလာ၊ များလာပါစေ။ မူရင်းဖြစ်တဲ့ လေကြောင်းလုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်ပါတယ်။ မနက်ဆိုရင် မန်ကျည်းပင်အောက်မှာထိုင်၊ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ ထန်းလျက်ခဲကိုက်ပြီး စာရင်းတွေစစ်၊ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ဘ၀အရသာဟာ ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ အလုပ်များလွန်းလို့ ရေနွေးကြမ်းတွေအေးကုန်ပါတယ်။ ထန်းလျက်ခဲ ခွေးဆွဲသွားပါတယ်။ ဒါကိုသိတဲ့ Eliza က ကျွန်မကိုပုံတူယူပြီး ကော်ဖီသောက်ရင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုပဲ။ အလုပ်တွေများရင်းကော်ဖီတွေပါအေးသွားတာပါ လာတူနေတော့ ကူးချထားမှန်းအရမ်းသိသာပါတယ်။ အဲဒါတွေပေါ့ကျွန်မမကြိုက်တာ။ ဒါပေမယ့်နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါတယ်။ သူကအကြီးလေ။ ပြီးတော့ ဆွေနီးမျိုးစပ်လည်းတော်တာကိုး။
ဒီလိုနဲ့မနက်စောစောထ၊ လူအထင်ကြီးအောင်ခြံထဲက မန်ကျည်းပင်အောက်မှာထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ပြလိုက်ရတာ အမော။ ပြီးမှတစ်နေ့ခင်းလုံးပြန်အိပ်တာ ဘယ်သူမှ မသိ၊ မမိသေးလို့ တော်သေးတယ်။ Eliza တို့များ အလုပ်လုပ်တာ ဓါတ်ချောစာတွေကိုပဲအားကိုးနေရတာ။ ကျွန်မဆိုရင် မပျင်းမရိ စာတွေကိုတစ်စောင်ချင်းစီပြန်ရေးတယ်။ သူ့ဓါတ်ချောစာတွေဆိုရာ ဒီစာကိုကူး၊ နာမည်ပြောင်း၊ ပြန်ပို့။ ဒီလိုလုပ်နေတာမသိရင်ခက်မယ်။ ပြီးတော့သူ့အကြောင်းသိတယ်မဟုတ်လား။ နေရာတကာပါတတ်တော့ ရှိသမျှလူတွေက သူ့ကိုတိုင်တန်းတော့ ၀င်ဝင်ရှင်းရတော့ သူ့ခမျာ အမော။ ကျွန်မကတော့ ရှင်းတယ်။ ငါမဆိုင်ဘူး။ လာမရှုပ်နဲ့လို့တစ်ခွန်းတည်းပြောလိုက်တယ်။
Eliza ကသင်ပေးတယ်။ စီးပွားရေးဆိုတာ ရေရှည်ကြည့်တဲ့။ အမြီးကျက်အမြီးစား၊ ခေါင်းကျက် ခေါင်းစား မလုပ်နဲ့တဲ့။ ပိန်းလိုက်တာ။ အမြီးကျက်တုန်းမှ အမြီးမစားရင်၊ ခေါင်းကျက်တုန်းခေါင်းမစားရင် ဘာသွားစားရမှာလဲ။ ပရိသတ်ကြီးပဲစဉ်းစားအဖြေပေးကြပါ။ ဒါကြောင်းသူ့လုပ်ငန်းမအောင်မြင်တာ။
ဒါနဲ့စကားမစပ်။ သူ့ရုံးရောက်ဖူးကြလားမသိဘူး။ သူ့ခမျာ ၁၅ ပေလောက်တောင်မရှိတဲ့ တိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ၀န်ထမ်းလေး လေး၊ ငါးယောက်လောက်နဲ့လည်ပတ်နေရတာ။ ကျွန်မဆိုရင် ၀န်ထမ်းရာနဲ့ချီရှိတယ်။ ညောင်းရင်တောင်နှိပ်ပေးဖို့ အနှိပ်သည်တွေတောင်ခေါ်ထားနိုင်တယ်။ ဒါနဲ့များ ကျွန်မ လုပ်ငန်းက သူ့လောက်မကြီးကျယ်ဘူးလို့ထင်နေရှာတာ။
သူ့ဝန်ထမ်းတွေကို Tea Time လောက်အလကားကျွေးနိုင်တာများ ကြွားလို့ကိုမဆုံးဘူး။ ငါတို့များ ရွာအလှူကိုပြလိုက်ချင်တယ်။ နေ့လည်စာဝယ်စားဖို့ပိုက်ဆံမပါလာတာများ အလုပ်များလို့မစားနိုင်ဘူးဆိုပြီး ကြွားလုံးထုတ်ရပြန်တယ်။ ကျွန်မမှာရယ်လိုက်ရတာ။ အတွင်းသိတွေဆိုတော့ သူဘယ်လိုဖုံးဖုံး သိနေတယ်လေ။
Eliza ခများ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလိပ် စတဲ့အဖြူကောင်တွေနဲ့ပဲလုပ်နိုင်တယ်။ ကျွန်မမှာတော့ တရုတ်၊ ကုလား အဖြူ အမည်းစုံနေအောင်အလုပ်လုပ်တာ။ သူ့ထက်တောင်ပိုသေး။ ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတင်စားတာက ကျွဲနှစ်ကောင်ကြားက မြေဇာပင် ဘာ၊ ညာနဲ့။ ကျွန်မကတော့ Hamburger ကြားက Cheese ပြားလို ဘ၀ပါ။ (သူ့ထက်တော့ သာသွားပြီ။ အဟိ)
မြန်မာတွေ ဦးနောက်တော်တော်ကောင်းသား….. (ဟုတ်ပါ့။ မဟုတ်တဲ့ ကလိမ်ကကျစ်နေရာတော်တော်များများမှာပေါ့)
တချို့ ဥရောပသားတွေ အင်္ဂလန်ကို Schengen Area ထဲမှာပါတယ်လို့ ထင်နေတာ…. အံ့ရော။
(အင်္ဂလန်ပါဆိုမှ ဘယ့်နှယ့်လုပ် ရှမ်းကန်ထဲမှာရှိမှာလဲ)
တခါတလေ နပိုလီယံ ဘာကြောင့် စစ်ရှုံးသလဲဆိုတဲ့ ကျောင်းတုန်းက သင်ထားခဲ့တာလေးတွေ သဘောပေါက်လာသလိုလို… (နပိုလီယံ စစ်မနိုင်လို့ ရှုံးတာ)
ဘုရားတရားနဲ့ပတ်သက်လာရင် ကျွန်မကတော့ အရှေ့ဆုံးကပဲ။ ပြီးမှငိုက်နေတာ။ ဟုတ်ပေါင်။ တက်တက်ကြွကြွဝင်ပါတယ်။ Eliza တို့များ ၃၈ ဖြာမင်္ဂလာတောင်မှ လွယ်တာပဲရတယ်တဲ့။ ကျွန်မလည်းသိပ်မကွာပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူ့ထက်တော့သာတယ်။ ပဌာန်းတွေ ဘာတွေမှာ နည်းနည်းလောက်ထောက်ပေးလိုက်ရင် အစအဆုံးဆိုနိုင်တယ်။ ဥပမာ .. အရှေ့က ဟေတု လို့ထောက်ပေးလိုက်ရင် ကျွန်မက ကျန်တာဖြစ်တဲ့ ပစ္စယော။ အရမန လို့ထောက်ပေးရင် ကျွန်မက ပစ္စယော ဆိုပြီး အစအဆုံးအဆင်ပြေပြေရွတ်သွားနိုင်တယ်။
Eliza တို့က ပြောချင်တာတွေပြောသွားပြီး နောက်ဆုံးတော့ ၀န်ခံရှာပါတယ်။ လူပဲလေ Perfect မဖြစ်ဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် ကျွန်မလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် စကားလက်ဆောင်ပါးလိုက်ပါတယ်။ Eliza ထက်သာတာက ကျွန်မက အင်္ဂလိပ်လိုရေးပေးမှာပါ။
လူကြီးသူမတွေဆုံးမထားတာတွေနဲ့ Mercury one way, Iron one way [ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်း] မလုပ်ကြနဲ့။ အလုပ်ဆိုတာ Hand Free Jasmine [လက်လွတ်စပယ်] မလုပ်သင့်ဘူး။ မသိတဲ့၊ မတတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ Don’t Make the Teacher [ဆရာ မလုပ်နဲ့ ]။
ဒါပါပဲ။ အောက်မှာတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ နောင်လာနောက်သားတွေ လေ့လာနိုင်အောင် အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာလေးပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လေ့လာကြပါ။
အော်.. ဒါနဲ့။ ကျွန်မလုပ်နေတဲ့ လေကြောင်းလုပ်ငန်းဆိုတာ မသိကြသေးဘူးနော်။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ယပ်တောင်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။
ရေချိုးချင်တယ် I Want to Break the Water
ဒီနေ့နေပွင့်တယ် Today, the Sun is Open
ကျေးဇူးပြုပြီး မီးဖွင့်ပါ Please Open the Fire
မီးပိတ်လိုက်တော့ Close the Fire
ဗိုက်မဆာ ဘူးလား Stomach Not Hungry?
ရေဝင်ပြေး Water Enter Run
မနေ့ က နှာခေါင်းပိတ်တယ် Yesterday, My Nose closed
ကိုယ်ပူနေတယ် Body is Hot
ဖုန်း အားသွင်းလိုက် Insert the Force to the Phone
သီချင်း နားထောင် Song Ear Erect
ဖိနပ် စီးတော့ Ride Your Shoe
ဈေးကြီး မိလာတယ် Catch the Big Market
အိမ်ရှင် လာလိမ့်မယ် House Will Come Alive
လေတက် သွားပြီ Air Climbed Already
ဈေးတွေ တက်ကုန်ပြီ Markets are Climbing
ခေါင်းကိုက်သေးလား Still Bite the Head ?
မဲပေးကြ Give Black
ဝက်သား စားသလား Eat the Pig’s Son?
မြစ်တို့ ၏ မာယာ Trick of the Rivers
မတတ်နိုင်ဘူး ဒါဟာ ကံပဲ I Can’t Install. This is Lake
စိတ်ပူ လို့ လား Mind is Hot ?
ချစ် နေသေးလား Love Sun Small ?
မိုးရွာ တဲ့ နေ့Rain Village Day
ဖြည်းဖြည်းလုပ် Slow Slow Make
ဓာတ်လှေကား Electric Ladder
နှလုံးသား လျှို့ ဝှက်ခန်း Heart Secret Room
မိန်းမ မယူနဲ့Don’t Take Woman
ရေခဲ သေတ္တာ Ice Box
« Reply #56 on: May 03, 2012, 12:47:29 PM »
« Last Edit: May 03, 2012, 12:53:48 PM by zawye »
ဒီမှာ မိတ်ဆွေ... ရှေ့သွားမလို့လား... နောက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ချစ်သူကိုငဲ့ကြည့်ဦးလေ အော်.... ပြောတာနဲ့ ပြန်လှည့်တာပဲလား.... ရှေ့မှာ မျှော်နေတဲ့ ရည်းစားလောင်းလေးကို အားနာပါဦး... အော်... ဟိုသွားမလိုဒီသွားမလိုလုပ်မနေပါနဲ့ ကိုယ့်ဖိနပ်ကိုပဲပြန် ငုံ့ကြည့်ပါဦး ... ဘယ်တစ်ဖက်ညာတစ်ဖက်ကြီး.... ဟီးး (ချစ်လို့ စတာနော် ခင်ရင် vote+ ပေး ... ဒါဘဲ ... ကျန်တာမန်ဒါလီ)
« Reply #57 on: May 03, 2012, 01:38:16 PM »
Quote from: zine zine on May 03, 2012, 12:47:29 PM
« Reply #58 on: May 05, 2012, 01:33:04 PM »
mail ထဲမှာတွေ့လိ်ု့ ရှယ်လိုက်ပါတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော် အခွေကြည့်နေတုန်း အမေက စာအုပ်ကိုင်ဝင်လာပြီးပြောတယ် ‘‘ငါ့ကို
ဒီစကားလေးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ပြောပြပေးစမ်းပါ။’’
အမေ။ ။ ဒီ ‘‘i don't know’’ ဆိုတာဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ။
ကျွန်တော်။ ။ ‘‘ကျွန်တော်မသိဘူး။’’
အမေ။ ။ နင့်ကို တက္ကသိုလ်ထားတာ ၃၊ ၄ နှစ်ရှိနေပြီ။ နင် ဘာဖြစ်လို့ ဘာမှကို
ကျွန်တော်။ ။ မဟုတ်ဘူး။ ‘‘ကျွန်တော်မသိဘူး’’ ပါဆို။
အမေ။ ။ ဒါတောင် ၀န်မခံချင်ဘူး ！！！$@％!#$^&％#$％@$％@#$％!^％^!^％$^#&..
အမေ။ ။နင် ငါ့ကို ဒါ ထပ်ပြီးပြောပြစမ်း။ ‘‘i know’’ ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ။ နင်
ကွန်တော်။ ။ဟုတ်ကဲ့။ ‘‘ကျွန်တော်သိတယ်။’’
အမေ။ ။ သိရင်မြန်မြန်ပြောလေ။
ကျွန်တော်။ ။ ‘‘ကွန်တော်သိတယ်’’ ဆိုနေမှ။
အမေ။ ။ နင်ပြဿနာရှာနေတာလား။ စောစောက အတီးခံရတာ နည်းတယ်ပေါ့၊ ဟုတ်လား။
ကျွန်တော်။ ။‘‘ကွန်တော်သိပါတယ်’’ ဆိုနေ။
အမေ။ ။သိရင်ပြောလေ။ မတတ်တာကို တတ်ချင်ယောင် မဆောင်နဲ့။
အမေ။ ။နင်သတိကြပ်ကြပ်ထားနော်။ ပိုက်ဆံတွေ ဒီလောက်အကုန်ခံပြီး တက္ကသိုလ်ပို့တာ၊
အခုဘာဆိုဘာမှ မသိဘူး။ ဒီလောက် နည်းနည်းလေး တတ်တာနဲ့ မအေကို ဟိတ်ဟန်
လုပ်ချင်တယ်ပေါ့။ နင့်ကို နောက်ဆုံးတစ်ခုထပ်မေးမယ်။ ငါ့ကို ကောင်းကောင်း
မပြောနိုင်လို့ကတော့ နင့်ကို ထပ်ဆော်မယ်။ ငါ့ကို ဒါဘာသာပြန်ပြစမ်း။ ‘‘i know,
want to tell you’’ ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ။
ကျွန်တော် မူးလဲသွားတယ်။ ခေါင်းအုန်းယူပြီး ကိုယ့်ခေါင်းကို အချက် ၃၀ ရိုက်တယ။်
နံရံကို ခေါင်းနဲ့ အချက် ၄၀ ပြေးဆောင့်တယ်။ ကိုယ့်ပါးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အချက်
၅၀ လောက် အပြန်အလှန်ရိုက်တယ်။ ခြေထောက်နဲ့ စားပွဲစောင်းကို အချက် ၆၀ ကန်တယ်။
သွေးတွေအသားတွေ ထူပူလာတော့ အမေ့ကို မေးလိုက်တယ်။ ကဲ ကျေနပ်ပလား။
သူက ထပ်မေးပြန်တယ်။ ‘‘သားရယ်၊ i'm very annoyant, don't trouble me ဆိုတာ
ကျွန်တော်။ ။‘‘ကျွန်တော် ဒေါသထွက်နေတယ်။ ကျွန်တော့်ကို လာမရှုပ်နဲ့။’’
အမေ။ ။‘‘အရိုက်ခံချင်တယ်ပေါ့။ မအေကို ဒီလို ပြောရလားဟဲ့’’ (အဲဒါနဲ့
အမေ။ ။ ‘‘i hear nothing, repeat ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ’’။
ကျွန်တော်။ ။ ‘‘ကျွန်တော်ဘာမှမကြားရဘူး။ ပြန်ပြော။’’
အမေ။ ။ ‘‘i hear nothing, repeat.’’
အမေ။ ။ ‘‘what do you say ဆိုတာကိုရော ဘယ်လို ရှင်းပြလို့ရလဲ။’’
ကျွန်တော်။ ။ ‘‘ဘာပြောတာလဲ’’ (တခါထပ် အဆော်ခံရပြန်တယ်။)
အမေ။ ။ ‘‘look up in the dictionary ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ။’’
ကျွန်တော်။ ။ ‘‘အဘိဓါန်မှာရှာ။’’
အမေ။ ။‘‘အဘိဓါန်မှာ ရှာတတ်မှတော့ ငါကနင့်ကို ဘာဖြစ်လို့မေးနေတော့မှာလဲ။’’
အမေ။ ။ ‘‘you had better asked somebody ဆိုတာကိုရော ဘယ်လို ဘာသာပြန်မလဲ။’’
ကျွန်တော်။ ။‘‘တခြားလူကို မေးတာပိုကောင်းမယ်။’’
အမေ။ ။ ‘‘နင်က ငါ့သားဟဲ့။ ငါ တခြားလူမေးပြီး ဘာလုပ်ရမှာလဲ။
ကျွန်တော်။ ။ ‘‘အမလေး၊ ဘုရားသခင် ကယ်တော်မူပါ။’’
အမေ။ ။ ‘‘မအေကို ပြဿနာရှာတဲ့ကောင် ဘုရားသခင်လဲ နင့်ကို မကယ်နိုင်ဘူး။’’
အမေ။ ။‘‘ငါထပ်မေးမယ်။ use your head, then think it over ဆိုတာရော
ကျွန်တော်။ ။ ‘‘ခေါင်းလေးဘာလေးသုံး။ ပြီးရင် သေချာထပ်စဉ်းစား။’’
အမေ။ ။ ‘‘အကောင်စုတ်၊ ငါ့ကိုများ ပြန်ပြောရတယ်လို့..’’ (တဆက်ထဲ
ကျွန်တော်။ ။ ‘‘လောကမှာ အမေသာ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။’’
အမေ။ ။‘‘အင်း၊ ဒါမှ ဟုတ်တုတ်တုတ်ရှိသေးတယ်။ ခဏနေကျရင်
လုပ်ပေးမယ်။ မနက်ဖြန်ကျမှ ထပ်မေးတော့မယ်။’
« Reply #59 on: August 11, 2012, 05:21:31 PM »
ကျုပ်တို့ရွာအ၀င်လမ်းမှာ ကျောက်တုန်းကြီးတခု ခံနေတာတပတ်လောက်ရှိပြီ။ဒီကျောက်တုံးကြီးကို ဘယ်သူ မှ မဖယ်။ ရှောင်ကွင်းသွားကြတယ်။ ဟိုလူ ဖယ်နိုးနိုး၊ ဒီလူ ဖယ်နိုးနိုး စောင့်နေကြပုံရတယ်။ ကျုပ်တို့ရွာက ဒီလို ...။
ကျုပ်က ဒီကျောက်တုံးကို ဘယ်လိုဖယ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး စဉ်းစားနေတယ်။ အဖြေရရင်တောင်မှ အခုရွှေ့ လို့မအား။ ဘာလုပ်နေလဲ မေးကြလိမ့်မယ်။ ဟဲဟဲ။ အရက်သောက်နေလို့ဗျို့။ ကတိမတည်တဲ့ရည်စားကြောင့် အသည်းကွဲနေတာဗျို့။ ဓာတ်ရှင်တွေထဲက မင်းသားးတွေလိုပေါ့။
ရွာထဲက အသံတွေကို နားထောင်ကြည့်။
“ပြောကိုမပြောချင်ဘူး။ ဒီကျောက်တုံးကို မဖယ်ကြဘူး။ အဲဒါ ရွာလူကြီး မကောင်းလို့ပေါ့။ သူ့အိတ်ထဲ ထည့်ဖို့ ပဲ လုပ်နေမှာပေါ့။ နှစ်တွေ ဒီလောက်ကြာနေပြီ ရွာလူကြီးလုပ်နေတာ။ ဘာတခုမှ မတိုးတက်ဘူး။ ငါတို့လည်း ဒီကျောက်တုံးကို မဖယ်နိုင်ဘူး။ ၀မ်းရေးအတွက် ဖင်ယားလို့တောင် မကုတ်အား။ လူကြီးလုပ်တဲ့သူ တာဝန်ပဲ။ ရွာလူကြီးက မကောင်း။ မကောင်း။ အင်းခက်တယ်နော်”
“ကျောက်တုံးဗန်းပြ လုပ်စားကြရအောင်။ ဟေး ... ဟေး”
“လမ်းသွားလမ်းလာ စေတနာရှင်များခင်ဗျား။ ဒီကျောက်တုံးကြီးကို ဖယ်နိုင်ဖို့ အလှူငွေလေးများ စွန့်ကြဲသွား ကြပါ။ မြို့ပေါ်က စက်ကြီးငှားရမှာမို့ တနားကြပါခင်ဗျား။ သာဓု ... သာဓု။ ညောင်စေ့လောက်လှူ ညောင်ပင် ကြီးလောက်ရကြပါစေ”
ရွာလူကြီး ဦးပေါတာကလည်း တမျိုး။
“ဟေ့ ဒီကျောက်တုံးကို ငါ ဖယ်မယ်ဟေ့။ ဘယ်သူမှ ပူစရာမလိုဘူး။ ငါ ဖယ်နိုင်တယ်။ လူလည်တို့ လုပ်စား တာ လွန်တယ်နော်။ ငါက တရားဝင် လူကြီးကွ။ ငါ ဖယ်မယ်။ ငါ ဖယ်မယ်”
အော်တဲ့ လူတွေပဲ များပြီး ကျောက်တုံးကြီးက နေရာမရွေ့။
ဒီလိုနဲ့ ရက်ပေါင်း (၂၀) ကျော်ကြာလာရော ကျနော်လည်း အသည်းကွဲရောဂါကနေ နာလန်ထလာတယ်။
မူးမူးနဲ့ ကြားထားတာတွေ ပြန်စဉ်းစားနေမိတယ်။
မဖြစ်ဘူး။ မဖြစ်ဘူး။ ရွာအ၀င်လမ်းမှာ ကျောက်တုံးကြီးခံနေတာ ရွာသိက္ခာကျတယ်ကွာ။ ငါ သွားဖယ်မယ်။
အရက်အားလေးနဲ့ မာန်တင်းပြီး ကျောက်တုံးကြီးဆီ ကျနော်လှမ်းသွားတယ်။
ခေါ်သံကြားလို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါ်စွာကျယ်တို့အုပ်စု။
“ဟဲ့ ငမူး ... အဲဒါ နင့်အရာလား။ ဒါ ရွာလူကြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စ။ နင်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ လူလည်တို့လည်း အလှူခံ နေတယ်လေ။ သူတို့လုပ်မှာပေါ့။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား။ ကိုယ့်စီးပွားကိုယ်ရှာပေါ့။ နင် ဘာရမှာမို့လို့လဲ”
“ရရ မရရ။ အားလုံးကောင်းဖို့ ကျောက်တုံးရွှေ့ချင်တာပါ”
“သွား သွား သူတော်ကောင်းကြီးရေ”
ကျောက်တုံးကြီးကို ပါလာတဲ့ ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေနဲ့ ရွှေ့မယ်လုပ်နေတုန်း ...
“ဟိုး ရပ် ဆရာ။ ဟိုး ရပ်”
သြော် ... ကိုလူလည်တို့ပါလား။
“ဒီကိစ္စ မင်းနဲ့ လုံးလုံးမဆိုင်။ မင်းကို ရွာလူကြီး ခိုင်းတာလား။ ရွာလူကြီး သူလျှိုထင်တယ်။ မင်းဘယ်လောက် ရလာလဲ”
“မဟုတ်ပါဘူး ဆရာတို့ရယ်။ လေးစားပါတယ်။ ကျနော် ဒီကျောက်တုံးကို ရွှေ့ပေးချင်တာသက်သက်ပါ”
“မရဘူးကွ။ ရက်ပေါင်း (၂၀) လုံးလုံး ငါတို့ အာညောင်းခံ၊ အလှူခံပြီး ဒီကျောက်တုံးကို ရွှေ့ဖို့ လုပ်နေတာကွ။ အခုမှ မင်းကလာပြီး နာမည်ကောင်းယူမလို့ပေါ့လေ”
“တော် တိတ် ထွက်သွားစမ်း။ ငါတို့ ကော်မတီဖွဲ့ပြီးပြီ။ သွားစမ်း”
“ကျောက်တုံးကြီး ရွေ့သွားဖို့က အဓိကလို့ ထင်တယ်။ အားလုံးဝိုင်းလုပ်ကြတာပေါ့”
“ပြောနေ ကြာတယ်။ လေကျယ်တဲ့ကောင်ကို ဆုံးမလိုက်စမ်း”
ကျနော် ကြယ်တွေ လတွေ မြင်သွားတယ်။
နိုးလာတော့ မူးနောက်နောက်နဲ့ …
ရွာလူကြီး ဦးပေါတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
“ဒီရွာကို အုပ်ချုပ်နေတာ ငါကွ။ ကျောက်တုံးရွှေ့တာ မင်းအရေးလား။ ငါ့အရေးကွ။ လူလည်တို့နဲ့လည်း မ ဆိုင်ဘူး။ ဒီကောင်တွေကလည်း လုပ်စားတာ လွန်လွန်းတယ်။ ဒါတောင် ငါ့မကောင်းကြောင်းတွေ လျှောက် ပြောသေးတယ်။ ဒီကောင်တွေကို ရွာက နှင်ထုတ်လိုက်ပြီ။ မင်းကိုလည်း ရန်ဖြစ်မှုနဲ့ ဖမ်းတယ်ကွာ”
“ဗျာ … …”
ဒေါ်စွာကျယ်တို့က ထိတာ နည်းသေးဆိုတဲ့ မျက်နှာပေးတွေနဲ့ ကျနော့်ကို ကြည့်နေကြတယ်။
“တိတ် … ငါက တရားဝင်လူကြီးကွ။ ဘယ်လောက် ရင်းထားရတယ်မှတ်လဲ။
မင်းတရားဝင် ငါနဲ့ယှဉ်ပြီး လူကြီးဖြစ်မှ ဒါတွေလုပ်”
ဒီလိုနဲ့ ကျောက်တုံးကြီး အခုထိ နေရာက မရွေ့သေး ...။
credit to ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ
Pages: « 1234567 » | Go Up